Creative Space Design: စကားပြောသော မျဉ်းကြောင်းလေးများ
ကျွန်တော့ဆရာတယောက်ကစကားတခွန်းပြောဖူးပါတယ် "သန့်ဇင် ကိုယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ မျဉ်းတကြောင်းဟာ တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ခက်ခဲနိုင်သလို အဲဒီမျဉ်းတကြောင်းခြင်းစီမှာ အဓိပ္ပါယ်တမျိုးစီရှိတယ်။ အဲဒီမျဉ်းတကြောင်း စီမှာရှိတဲ့ နေရာအသီးသီးဟာ လူ့ရဲ့ ခံစားမှုအာရုံကြောင့် သရုပ်လက္ခဏာ တနည်းအားဖြင့် ခံစားမှု ဖြစ်ပေါ်လာတယ်" တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ မျဉ်းတကြောင်းစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ််တခုချင်းကို မစဉ်းစားခင် မျဉ်းဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်လားဗျာ။
မျဉ်းဆိုတာက ဟင်းလင်းပြင်မှာရှိတဲ့ အမှတ်နှစ်ခုကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းတခုပါပဲ။ အဲဒီမျဉ်းတွေဟာ အကြမ်းအားဖြင့် တည်နေပုံ လေးမျိုးရှိကြတယ်။
၁/ အလျားလိုက်တည်နေခြင်း (Horizontal Direction)
၂/ ဒေါင်လိုက်တည်နေခြင်း (Vertical Direction)
၃/ ဝဲဖက်သို့ ယိုင်၍ တည်နေခြင်း (Left Oblique) နဲ့
၄/ယာဖက်သို့ ယိုင်၍ တည်နေခြင်း (Right Oblique) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလေးမျိုးမှာမှ အခြေခံအားဖြင့် မျဉ်းနှစ်မျိုး ထပ်ပြီးခွဲနိုင်တယ်။
၁/ မျဉ်းဖြောင့် (Straight Line) နဲ့
၂/ မျဉ်းကောက် (Curve Line) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မျဉ်းကြောင်းတွေဟာ အလွန်ရှင်းလင်းတိကျတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိကြတယ်။ တိကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ်် တနည်းအားဖြင့် ထင်မြင်ချက်မပါပဲ အဲဒီမျဉ်းတကြောင်းကို စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးဆွဲလို့ မရပါဘူး။
ကဲ ဒါဆို အဲဒီမျဉ်းတကြောင်းစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို လေ့လာကြည့် ကြရအောင်နော်။
မျဉ်းဖြောင့် (Straight Line)
လျင်မြန် သွက်လက် အားရှိ ခိုင်မာတတ်တဲ့ သဘောကိ ုဆောင်ပါတယ်တဲ့။
မျဉ်းမတ် (Vertical Line)
ဖြောင့်မတ် တည်ကြည်ခန့်ငြား ထည်ဝါခြင်း မြင့်မြတ်ခြင်း သက်ဝင်တည်ငြိမ်တဲ့သဘောတို့ ကို ဆောင်ပါတယ်တဲ့။
မျဉ်းစောင်း (ယိုင်) (Oblique Line)
လှုပ်ရှားဆွဲငင် တွန်းကန်ပေါက်ကွဲတတ်တဲ့သဘော ကျဆင်းလှုပ်ရှားခြင်း ခုန်ပြန်လှုပ်ရှားခြင်း ခုန်ခြင်းသဘော တို့ ကို ဆောင်ပါတယ်တဲ့။
မျဉ်းကောက် (Curve Line)
ငြိမ့်ညောင်းသာယာ ပျင်းရိ ငြီးငွေ့ လေးကန်နှေးကွေး ထိုင်းမှိုင်းတတ်တဲ့သဘော ပြင်းထန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ဖော်ကျူးတဲ့ လေတိုက်ခံရတဲ့ သစ်ပင် တိမ်များ ကမ်းခြေကိုတိုက်ခတ်လာတဲ့ လှိုင်းများလို ပြင်းထန်လာမှု သဘောတို့ကို ဆောင်ပါတယ်တဲ့။
မျဉ်းခုံး (Concave Line)
အမြင့်သဘောဆောင် ငြိမ်သက်ငြိမ့်ညောင်းတဲ့သဘော တို့ ကို ဆောင်ပါတယ်တဲ့။
မျဉ်းခွက် (Convex Line)
အနက်သဘောဆောင် လှုပ်ရှားသွက်လက်မှုသဘောရှိ မှုတို့ ကို ဆောင်ပါတယ်တဲ့။
အဲဒီ မျဉ်းခုံးနဲ့ မျဉ်းခွက် နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် တည်ငြိမ်ခန့်ငြား ဂုဏ််သရေရှိ စွမ်းအားပါပြီး အလှအပဖွဲ့ ပန်းချီဆန်သော (Hogarth's line of beauty) မျဉ်းကို ရရှိပါတယ်တဲ့။
ဆုံးစမရှိ လည်ပတ်သောသဘော ကြီးမား ကျယ်ဝန်း ညီမျှချင်းသဘော တို့ ကို ဆောင်ပါတယ်တဲ့။
ဖြာထွက်သောမျဉ်း (Radiation Line)
သွက်လက်လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှု စုစည်းခြင်းသဘောဆောင် စမ်းရေပန်း(Fountain) ကြီးထွားပေါက်ရောက်မှု(Grow) နေရောင်ခြည် (Sunlight) ဘီးထောက်တံများ (Spokes ofawheel) အာရုံစူးစိုက်မှု (Concentration ofagiven spot)
မျဉ်းပြိုင် (Parallel Line)
မျဉ်းပြိုင်များဟာ တကြောင်းနဲ့တကြောင်းမဖြတ် ဖြတ်စရာနေရာမရှိ။
မြှားချွန်သဏ္ဍာန်ပါသောမျဉ်း (Pointed Arrow Line)
၎င်းမျဉ်းသည် အမြန်ဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံးသဘာဝကိုပြဆိုသည်။
လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်မှုသဘောဆောင် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ကြောင်းကို အခြားမျဉ်းတစ်ကြောင်းကဖြတ်သွားပြီး ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းကျိုး ဖြစ်ပေါ်သည်။ လျှပ်စီးလက်ကြောင်း LIGHTING
၎င်းမျဉ်းများသည် စက္ခုအာရုံ အဆုံးတိုင်ရောက်အောင်(ခရီးလမ်းဆုံး) သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ ထိုးထွက်လာသောမျဉ်းများသည်အဆုံးအထိ တွန်းပို ့ကာလက်စတုံးရက်စဲသည်။
ဆန် ့ကျင်ဘက်မျဉ်းများ (opposite line)
ခုန်သောမျဉ်းများ (Jump Line)
၎င်းမျဉ်းများသည် အသိအာရုံရှုပ်ထွေးကာ လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ မျဉ်းတွေမှာ ဝိသေသလက္ခဏာ (The Meaning Of Line) (၇) ရပ် ရှိပါသေးတယ်။
၁/ မျဉ်းကြောင်းတို့သည် ၎င်းတို၏ သဘောသဘာဝ အနက်အဓိပ္ပါယ် တို့ကိုဖော်ဆောင်သည်။
၂/ ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း ကွက်လပ် အရွယ်အစားတိုကို ပိုင်းခြား သတ်မှတ်သည်။
3/ မိမိဖော်ပြလိုသော စိတ်ကူး အကြံအစည်နှင့် အကြောင်းအရာအချက်အလက်များကို အမှတ်သကေတများဖြင့် ပုံဖော်နိုင်သည်။
၄/ သတ်မှတ်ထားသော အစွန်းအနားမျဉ်းကြောင်းများဖြင့် ပုံသဒန်များ ထုထည်များကို သတ်မှတ်ပုံဖော်နိုင်သည်။
၅/ မိမိဖော်ပြလိုသောနေရာသို စိတ်အာရုံစူးရောက်စေရန် မျဉ်းကြောင်းများဖြင့် ဖော်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
၆/ ဒီဇိုင်းပုံစံလှပမှုများကို မျဉ်းကြောင်းများဖြင့်စီစဉ်ချမှတ်၍ အလှဆင်ဖန်တီးတီထွင်နိုင်သည်။
၇/ အသွေးနုရင့်အဆင့်ဆင့် (Tone) ကို မျဉ်းကြောင်းများဖြင့် ဖော်ပြဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
အခုလောက်ဆို မျဉ်း -----အကွေ့ အဝိုက် အဖြောင့် အကောက် အယိုင် အနွဲ့ အဝန်းအဝှိုက် သူ့ သဏ္ဍန် သူ့ဟန်အသီးသီးရဲ့ညွှန်းဆိုဖော်ပြမှု အတွင်းသဘောကို အတော်အသင့် တော့လေးကျက်မိကြလောက်ပါပြီ...
ကိုယ်တိုင်ဟာ..ဘယ်မျဉ်းလို အဓိပါယ်နဲ့ ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်နေသလဲ ဆန်းစစ်ကြည့်ပြန်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွန်းနေပါတယ်..
ဘယ်လို မျဉ်းတစ်ကြောင်းလဲ....... ? ? ?
ကျွန်တော်ရော...................... ? ? ?
ဘယ်လိုမျဉ်းများလဲ................. ? ? ?
ဘာပဲပြောပြော...ဘယ်လိုမျဉ်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဥိးတည်ရာကတော့ဖြင့် ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်လေ...။
လေ့လာမိသလောက် ပြန်လည်ဝေမျှတာပါ။ အသေးစိတ် လေ့လာမယ်ဆိုရင် အောက်က Links များမှာသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
References :1: Wikipedia
2: အခြေခံပန်းချီပညာ (ဦးကျော်သူရိန်)
Posted by CreativeDesign at 10:41 PM